Soomaalida iyo bixinta naanaysta xun - Adiga naaneystaada maxay tahay?
Home Aragti-doon Soomaalida iyo bixinta naanaysta xun – Adiga naaneystaada maxay tahay?
Hadii aad tahay qof ka shaqeeya farsamada gawaarida, magacaaga wuxuu noqonayaa ‘Makaanik’, Haddii aad biyaha ka shaqaysatid na waxaa laguugu yeerayaa ‘Biyoole’.
Soomaalida ayaa aad u jecel in ay bixiyaan magacyada naanaysta ah iyaga oo waliba sii doorta naanaysta tilmaamta meesha qofka ka liito ama ka dhibanyahay ee jirkiisa.
Waxaa suurtogal ah in saddexdii qofood oo Soomaali ah oo meel wada jooga in ugu yaraan laba kamid ah ay leeyihiin magacyo naanays ah.
Waxay sidoo kale naanaysta Soomaalida ku bixiyaan shaqada uu qofkaas qabto, iskuma dhibaan in ay ku weydiiyaan magacaaga, waxay magac ka qaataan shaqada aad qabatid.
Waxay ahayd 2017-dii mar aan ka shaqaynayay suuqa magaalada Boosaaso oo aan ku lahaa foorno lagu dubo kaluunka. Waxaa la ii bixiyay kaluunle.
Arintan ayaa waxaa ay la yaab ku noqotaa dadka ajaaniibta ah, gaar ahaan kuwa la dhaqma Soomaalida.
Justin wuxuu sannadkii 2014-kii ka shaqeynayay Muqdisho, wuxuu qoraal ka sameeyay sida ay Soomaalida u jeceshahay magacyada naanaysta xun xun ama edeb darrada ah.
Wuxuu yiri, “Markaan helay kaarka aqoonsiga ee madaxtooyada waan farxay, balse magacayga ku qoran kaarka waxaa ku ag-qornaa Timo cadde, kaas oo ugu dambayn noqday naanaystayda Soomaaliyeed”
Wuxuu aad uga naxay markii ugu horreysay ee uu la kulmo naanaysta Soomaalida, wuxuu yiri, “Gabadhii nadaafada ka shaqaynaysay ayaa waxay i weydiisay in aan arkay wiilkii qadada noo keeni jiray iyada oo isticmaashay magaca faroole, waan fahmi waayay, kadibna waxay tusaale ahaan u isticmaashay faraheeda, waxayna igu tiri wiilka aan faraha lahayn ayaan ku weydiinaya.”
Wuxuu sii raaciyay, “Wiilka waxaa la dhahaa Cabdifataax, wuxuu ku dhaawacmay oo uu qaar ka mid ah farahiisa ku waayay hoobiye lagu soo riday madaxtooyada dhowr bilood ka hor, waxaan ka naxay sida uu dareenkiisa noqdo haddii loogu yeero magaca naxariis darrada ah.”
Waxaa hadal-hayn barta twitter-ka ka dhaliyay naanaysta ay Soomaalida bixiso.
Qoraal uu soo dhigay qof twitter-ka wax ku qora oo lagu magacaabo JAW ayaa sidan u dhigan, “Soomaalida waa dad aad u naxariis darran markay timaaddo magac bixinta naanaysta ah, sidee bay ku dhacday in adeerkay oo ah qof aad u gaaban ay ugu wacaan “Nin fadhiya”
Qoraalkaan ayaa bilaabay hadal hayn ay boqolaal Soomaali ah ay ka war celiyeen. Waxaa suurtogal ah in aa ku qososhid magacyada qaar, waxaan halkaan kusoo qaadanaynaa kuwa ugu yaabka badan.
Dr. K ayaa wuxuu yiri, “Waxaa jiray nin reerka saaxiib la ahaa oo wadi jiray taksi, waxay ugu wici jireen Tiibisho, sababta oo ahayd in uu ahaa qof caato ah hadana marwalba qufaca.” Wuxuu sii raaciyay, ma hubo in ninkaas waligii laga daweeyay cudurka Tiibishada.
There was once a family friend cab driver they called Ahmed teebish because of skinny weight and constant coughing, not sure if he was ever diagnosed with TB tho..
— Dr. K (@drkamaldds) March 10, 2021
Istarliin Maxamad ayaa sidoo kale jawaab ay ka bixisay qoraalka ayaa waxay tiri, “Waxaa jirtay mar nin saaxiib aan ahayn oo ahaa qof gaaban uu guriga igusoo booqday, markii uu tagay ayaa eedaday waxay igu tiri “Yawaye ninka siqaaye”
Yow there’s a time a short guy friend visited me at home and my distant edo be like “yawaye ninka siqaye” 🤷🏿‍♀️
— starlyn mohamed (@starlyn_mohamed) March 10, 2021
Qoraalkan istarliin ayaa waxaa uu caddayn u yahay in Soomaalida ay kuu bixin karaan naanays xitaa hadii aysan aqoon kuu lahayn.
Hiba oo ka mid ah dadkii war celinta ka bixiyay qoraalka ayaa waxay tiir, ” Markaan yaraa waan hadal badnaa, reerkayga waxay ii bixiyeen ”Harun Macruuf” oo ah magaca wariye rugcadaa Soomaaliyeed.
Hooyo ina abtideedna waxaa loo bixiyay “cirbad” maadaama faraheeda ay dhuubni iyo dherer isku darsadeen.”
As a child I spoke non-stop and my family called me harun maruf, after a somali journalist and my mums cousin was nicknamed cirbad cause she had really skinny and long fingers.
— reader in Jung jaehyun advance studies (@rainy_moonlit) March 10, 2021
Badanaa magacyada qaar waa kuwa ay dhalinyarada iyo bulshadaba ku baashaalaan bixintooda si loogu qoslo, balse waxaan sidoo markhaati ka wada nahay in Soomaalida aysan jixin jix ka muujinin bixinta naanaysta nooca tilmaama dhibaatada ka muuqata jirka qofka ay ugu wacayaan magacyada aan habboonayn sida curyaanka, iley, dhagool, lugey, ganey iyo wixii la mid ah.
Waxaad ogaataa haddii aad isticmaashid magacyada qaar in aad dhaawac gaarsiinaysid qalbiga qof aanan waxba kaa samaynin. Sidaa darteed jooji, ama iska ilaali in aad magacyada noocan isticmaashid, ilaahay ayaa qof walba si gooni ah u abuuray, waa in aan Alle abuurkiisa xushmeyno.
Previous articleAtariishada filimkii Game Of Thrones maxaa wajigeeda muran loo galiyay?
Next article6 arrin oo dadka taajiriinta ah ay sameeyaan balse faqiiriinta aysan sameynin